Qorshe ka dhan ah macdanta Soomaaliya oo Qadar ay wado oo la kashifay
Tan iyo markii la doortay Farmaajo waxaa xoogeysta joogitaanka Dooxa ee gudaha dalka.
ROMA, Italy – Dowladda Qadar ayaa dooneysa in ay gacanta ku dhigto macdanta uranium-ka ee Soomaaliya si ay uga iibiso Iiraan, sidda uu ku waramay bogga Talyaaniga kasoo baxa ee lagu magacaabo Varese Press.
Dooxa iyo Tehran ayaa leh xiriir dhanka kala iibsiga kheyraadka dabiiciga ah gaar ahaan Shidaalka, waana mid kamid ah suuqyadda dhifka ah ee Iiraan ay u haysato shidaalkeeda maadaama Mareykanka xayiraad saarey.
Macdanta uranium-ka ayaa kamid ah maadooyinka muhiimka u ah sameynta hubka wax u gumaadda ee Nuk-liyeerka oo Iiraan ay haatan ku howlan tahay, talaabadaas oo reerka Galbeedku kasoo horjeedaan.
Warbixinta jaraa'idka ma bixin fahfaahin dhameystiran oo ku saabsan qaabka Qadar ay dooneyso ay ku qabsato macdanta uranium-ka ee Soomaaliya, balse waxaa sanadihii dambe xooganaa joogitaankooda.
Tan iy markii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo doortay madaxweynaha Soomaaliya, Dooxa ayaa sarre u qaadey joogitaankeeda dalka, iyaddoo ka fuliso mashaariicyo aan laga biixn tafaasiil badan.
Badi mashaariicda waxay u badan yihiin degaanada xeebaha, taas oo dhankeeda ay su'aallo ka keeneyn siyaasiyiinta iyo qaar kamid ah xisbiyadda mucaaradka ah.
Fahad Yaasiin Daahir, madaxa hay'adda nabad-sugida iyo sirdoonka qaranka isla markaana horey wariye uga soo ahaa Telefishinka Al Jazeera, ayaa la sheegay in uu yahay isku xiraha Qadar iyo dowladda hada jirta.
Sidoo kale, Fahad ayaa la aaminsan yahay in uu yahay ninka ugu awooda badan xukuumadda federaalka isla markaana uu Qadar kasoo qaadey dhaqaalihii lagu doortay Farmaajo, bishii Febraayo, 2017-kii.
Xaqiiqada hadda soo ifbaxday ayaa kusoo aadeysa xilli ay horey u jireen eedeymo ay kamid yihiin in Qadar ay dooneyso in ay Soomaaliya ka dhigto meel ay kala dirirto dalalka gobolka iyo taageerada argagixisada.
Wargeyska New York Times ayaa wariyey in qarax ay Daacish ka geysatay dekada Boosaaso oo lagu dilay madaxii DP World lagu fuliyey codsi ka yimid Qadar, wallow eedeymahaas ay iska fogeysay Dooxa.
Warbaahinta Talyaaniga ayaa dhowaan warisay in Qadar ay kaalin fududeyn ah ka cayaartay lacagta 3-da milyan ee lagu sii daayey Silvia Romano, haweenaydii ay Al-Shabaab ku haysatay qaybo kamid ah Soomaaliya.
Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Masar iyo dalal kale oo xulafo ah ayaa xiriirka u jaray Qadar kuna soo rogay xayiraad dhulka iyo cirka ah iyagoo ku eedeeyay in ay maalgeliso kooxaha argagixisada ee caalamiga ah.
"DF waxay xoog ku askareyneysaa wiil aan agoonimo ku koriyey"
Soomaliya 08.02.2020. 21:20
Maxamed Xasan oo maqane ah 14-casho ayaa "loo wadayaa" tababar aysan raali ka ahayn qoyskiisa.
"Khatar ka dhalan karta" heshiis ay DF la gashay Qadar oo laga digay
Soomaliya 02.11.2019. 22:22
​Xaaf: Go'aanka Galmudug anigaa leh, cidna kalama tashanayo
Soomaliya 22.09.2017. 17:00